यस्तो छ दशैंको धार्मिक सामाजिक र आध्यात्मिक महत्व,जमरा पूजा कसरी गर्ने ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यस्तो छ दशैंको धार्मिक सामाजिक र आध्यात्मिक महत्व,जमरा पूजा कसरी गर्ने ?
के पी रिजाल- नेपालीहरूको प्रमुख चाड मानिन्छ । राष्ट्रिय चाड समेत मनिने दशैँ हिन्दु धर्मवलम्बीहरुले आश्र्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पुर्णिमा सम्म मनाउने गर्छन्। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा (घटस्थापना)मा जमरा राखी नवमीसम्म दुर्गासप्तमिमा (चण्डी) पाठ गरी नव दुर्गा र तृशक्ती महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वोतिको विशेष पूजाआजा र आराधाना गरिन्छ ।
नवदुर्गामध्ये पहिलो दिन पूजा हुने दुर्गादेवीको नाम शैलपुत्री हो । दुर्गाको पूजा गर्दा अरू मन्त्र नजाने पनि कम्तीमा ‘ओं दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा दुर्गादेव्यै नमः’ भन्ने मन्त्र भने उच्चारण गर्नै पर्दछ । पूजा ६४ प्रकार, १८ प्रकार, १६ प्रकार, १० प्रकार र ५ प्रकारको हुन्छ । यसमध्ये नसके पञ्चोपचारले गरे पनि हुन्छ । पञ्चोपचार भन्नाले सामान्यतया चन्दन, अक्षता, फूल, धूप, दीप र नैवेद्य भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यसपछि जमारा राख्नुपर्ने शास्त्रीय प्रावधान भेटिन्छ । जमरा राख्ने भनेको शुद्ध जौलाई गाईको गोबरमा भिजाएर पूजा कोठामा राखिएको बालुवामा रोप्ने काम हो । जमरा राख्दा ‘ओं यवोसि यवयास्मद्द्वेषो यवया रातीः’ भन्ने मन्त्र पढ्नुपर्छ र ‘ओं भगवतीप्रसादरुपेभ्योङ्कुरिष्यमाणेभ्यो यवेभ्यस्तदधिष्ठात्रीदेवीदेवेभ्यश्च नमः’ भन्ने मन्त्रले चन्दन, अक्षता, फूलद्वारा जमरालाई पूजा गर्नुपर्दछ । जमरा माता भगवतीलाई बढी मन पर्ने पदार्थ भएकाले उनलाई खुसी पार्नकै लागि यतिबेला जमरा राख्ने र प्रयोग गर्ने गरिएको हो । त्यसपछि यथाशक्ति जप, पाठ, हवन, बलिदान गरी विश्राम गर्नुपर्दछ । बलिदानमा कुभिण्डो, काँक्रो, उखु, मुला, बेल, नरिवल र कृशर बलिको रूपमा दाल र चामललाई लिइन्छ । साँझ भजन, कीर्तन, आरती गरी जमरामा पानी राखेपछि पहिलो दिनको कृत्य पूरा हुन्छ ।
दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौँ दिन क्रमशः ब्रहृमचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता र कात्यायनी देवीको पूजा हुन्छ । पूजाको विधान र अन्य कृत्य सबै प्रथम दिनकै बमोजिम हुने गर्दछ । छै्रटौँ दिनकै साँझ फूलपाती भित्र्याउँदा ल्याउनु पर्ने बेललाई निमन्त्रणा गर्नुपर्ने शास्त्रीय प्रावधान छ । सप्तमीको दिन कालरात्रि नामक देवीको पूजा हुन्छ । यसैदिन वचनकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ । सरस्वतीको पूजा विशेष गरी पुस्तक, कलम, कापी र मसिदानी राखेर गरिन्छ । यस दिन दिउँसो फूलपाती ल्याएर देवी मन्दिरको अगाडि आँगनमा राख्नुपर्दछ । फूलपातीमा नौ जातका वनस्पति पर्दछन् । जसमा केरा, दारिम, धानको बोट, हलेदोको बोट, कुभिण्डो, कचु, बेल, अशोक जयन्ती रहन्छन् । यी वनस्पतिलाई दिनभरि त्यहींँ राखेर पूजा गरी साँझ बाजागाजासहित देवीको मन्दिरमा भित्र्याएर पुनः पूजा गर्नुपर्दछ । पूजा गरिसकेपछि ‘पत्रिके नवदुर्गेत्वं महादेव मनोरमे । पूजा समस्तां सङ्गृहृय रक्षमां त्रिदशेश्वरी’ भन्ने मन्त्रले प्रार्थना गर्नुपर्दछ । यसै दिन साँझ माता भद्रकालीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ ।
अष्टमीको दिन -जसलाई महाअष्टमी भनिन्छ) बिहान विशेष गरी महागौरी नामक दुर्गाको पूजा गर्नुपर्दछ । पूजा र अन्य विधान पहिलो दिनकै जस्तो भइहाल्यो । यसै दिन राति कालरात्रि गर्नुपर्दछ । कालरात्रि गर्दा विशेष गरी भैरव, सिंह, भगवतीको हातहतियार, गणमातृकाहरूको साथमा अष्टमातृका, नवदुर्गा, दशमहादेवी, कोटियोगिनी, दशदिशा र दिग्पाल आदिको पूजा गर्नुपर्दछ । त्यसपछि बलिदान र हवन गरेर त्यस दिनको कृत्य समापन गरिन्छ । बलिदानमा पनि पहिलो दिनको जस्तै पदार्थहरू रहने गर्दछन् । यद्यपि बलिदानमा बोको, राँगो, हाँस, कुखुरो आदिलाई पनि लिने गरिएको पाइन्छ तर ती सबै तामसिक पूजामा मात्र ग्राहृय हुन सक्छन् । पूजा सात्विक नै हुनुपर्छ भन्ने धर्मग्रन्थ र धर्मगुरुहरूको कथन छ । अब आयो नवमीको दिनको पालो । यस दिन विशेष गरी त्रिशूलिनी देवीको पूजा हुन्छ । नवदुर्गामध्येकी अन्तिम दुर्गा सिद्धिदात्री देवीको पूजा पनि यसै दिन हुने गर्दछ । दुई वर्षदेखि दसवर्षसम्मका नवकन्याको पूजा पनि यसै दिन गरिन्छ । कतैकतै प्रत्येक दिन एकएक कन्याको पूजा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यी सबै आ-आˆनो अवस्थामा भर पर्ने कुरो हो जसरी गरे पनि हुन्छ । यसबाहेक पहिले जस्तै हवन, बलिदान र साँझ भजन, कीर्तन तथा आरतीको प्रावधान त आˆनो स्थानमा छँदैछ ।
दशमीको दिन बिहान पहिलेको जस्तै दैनिक पूजाको कृत्य सकेर जया र विजया देवीको साथमा अपराजिता देवीको पूजा गरी जमरा चढाएर विसर्जन गरिन्छ । अपराजिताको पूजा गर्दा पहेँलो कपडामा सस्र्यं र अपराजिता नामक फूलको पात राखी गाँठो पारेर पूजा गरी दाहिने हातको पाखुरामा बाँध्न् पर्दछ । यसो गर्नाले आफूमाथि कसैले पनि विजय गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसरी नवरात्रीय विधान पूरा गरी मान्यजनहरूबाट टीका र जमारा लगाउनाले वर्षभरि सुख, शान्ति, सद्भाव र आयु, आरोग्य वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यतिबेला मान्यजनहरूले टीका लगाइदिँदा ‘आयुद्रोणसुते श्रयिं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे । ऐश्वयर्ंं नहुषे गतिश्च पवने मानंच दुर्योधने । सौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्तिसुते । विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे’ भन्ने मन्त्र पढ्दछन् तर महिलालाई टीका लगाइदिँदा भने उनीहरू ‘जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धातृ स्वाहा स्वधा नमोस्तुते’ भन्ने मन्त्र पढ्ने गर्दछन् ।
वस्तुतः दसैँ अर्थात् नवरात्र पर्व शक्ति उपासनाको पर्व हो । कतिपय श्रुति र स्मृति ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएअनुसार अग्नि, इन्द्र, वरुण र वायुलाई आˆनै शक्ति थाहा नपाएर आच्छुआच्छु बनाएको बेला जुन माता भगवतीले हैमवती उमाको रूपमा प्रकट भएर उनीहरूको स्थान र स्थिति बोध गराएकी थिइन् तिनै माता भगवतीले समयसमयमा भीमा, भ्रामरी, शताक्षी, शाकम्भरी, दुर्गा आदि रूपले प्रकट भएर मानवसमाजको सङ्कट निवारण गर्ने गरेकी छिन् । नवरात्रमा तिनै शक्ति स्वरूपिणी माता भगवतीको उपासना गरिन्छ । यसै पनि मानवजीवनमा शक्तिको कति आवश्यकता पर्छ भनिरहन पर्दैन । हामीलाई खान मात्र होइन खाएको चीज पचाउन पनि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यहाँसम्म कि हामीलाई सुत्न र उठ्न मात्र होइन सुतेर निदाउन पनि शक्तिकै आवश्यकता पर्दछ । नवरात्र पर्वमा सम्पन्न गरिने कृत्यहरू र आहार, विहार, अनुष्ठान र आत्मिक अनुशासन आदि परिपालन गर्नुपर्ने नियमहरू यही शक्ति सन्तुलन, संरक्षण र सम्बर्द्धनतर्फ परिलक्षित रहेकाले यसको अपरिहार्यता त आˆनो स्थानमा छँदैछ साथसाथै यसैको सेरोफेरोबाट भन्नु पर्दा यो पर्व कुनै वर्ग वा समूह विशेषको मात्र नभई सबैको हो भन्ने कुरोसमेत प्रस्ट हुन आउँछ ।